Ciyaaryahanno muhiim ah oo Masar kaga maqan dhaawacyo - BBC News Somali
Ciyaaryahanno muhiim ah oo Masar kaga maqan dhaawacyo
Image caption Mahmoud El Said ayaa loo soo xushay dhammaan ciyaarihii loogu soo baxayay koobka adduunka ee 2018ka
Dhawaacyo ayaa xulka qaranka Masar ka reebay Abdallah El Said iyo Mahmoud Abdel-Moneim 'Kahraba'.
Xulka Masar ee lagu naanayso Faraacida ayaa Axadda la dheeli doona xulka Congo Brazzaville, ciyaartaasina waxay ka tirsan tahay isreebreebka Koobka Adduunka ee 2018ka.
El Said ayuu dhaawac ka soo gaaray ciyaartii ay naadiga Al Ahly ee dalka Masar la yeelatay naadiga Etoile taas oo Axaddii dhacday, iyadoo guushu ay raacday naadiga reer Tunusia oo 2-1 ku badisay.
"Kulan ayaan yeelan doonnaa si aan u go'aansanno in aan labo ciyaartoy oo kale u yeerno iyo in kale, marka aan aragno waxa ka soo baxa," ayuu yiri tababare ku xigeenka xulka qaranka Masar Osama Nabeh oo arrintaas faahfaahim ka bixinayay.
Hector Cuper oo ah tababaraha Masar oo reer Argenite ah ayaa laf dhabar uga dhigtay kooxda ciyaaryahan El Said wuxuu u xushay lixdii ciyaarood ee isreebreebka Koobka Adduunka ee 2018ka, shan kulan ayuu dheelay saddex gool ayuuna dhaliyay.
Kahraba, ayaa isna shan jeer loo soo xulay Isreebreebka Koobka Adduunka ee 2018ka, wuxuuna saftay saddex ciyaarood wuxuuna dhaawacmay Khamiistii isaga oo Sacuudiga ugu dheelaya kooxda Al Ittihad.
Masar ayaa ugu dhibca badan dalalka ay horinta ku wada jiraan iyaga oo leh sagaal dhibcood, Koobka Adduunka ayayna u soo bixi doonaan haddii ay ka badiyaan Congo, Uganda-na ay ku guuldaraysato in ay magaalada Kampala kaga badiso Ghana oo ay Sabtida wada dheeli doonaan.